Amanqaku kaPete Eppele Martech Zone |
Amanqaku ngu UPete Eppele
UPete uzisa iminyaka engama-20 yamava esicwangciso semveliso, enceda iFortune 500 iinkampani ukuba zisebenzise idatha eNkulu ukuphucula ukusebenza kweshishini. NjengoSekela Mongameli oPhezulu weeMveliso kunye neSayensi, uPete unoxanduva lokukhokela ZilliantImizamo ye-R & D kunye nokuchaza imveliso yobomi kunye neemfuno. Phambi kukaZilliant, uPete wasebenza njengoSekela Mongameli weNtengiso yeMveliso kwiYclip. Phambi kweYclip, uPete ulawule ukoyiwa kwedatha kwe-KD1 kunye nezicelo zenkxaso yezigqibo ezisetyenziswa yiWalgreens, uPhuculo lweKhaya laseLowe kunye nePepsi / Frito Lay.
Ixabiso leXesha leXabiso lokwenyani elinokuKhulisa njani ukuSebenza kweShishini
NgoLwesibini, Februwari 11, 2020 NgoLwesibini, Februwari 11, 2020 UPete Eppele
Njengokuba umhlaba wale mihla ubeka ukwanda kokubaluleka kwisantya kunye nokuguquguquka, ukubanakho ukufaka ixesha langempela, amaxabiso afanelekileyo kunye nesikhokelo sokuthengisa kwiindlela zabo zokuthengisa zinokunika amashishini isandla esiphakamileyo kukhuphiswano xa kufikwa ekuhlangabezaneni nokulindelwe ngabathengi. Ewe kunjalo, njengoko iimfuno zentsebenzo zisonyuka, kunjalo nobunzima beshishini. Iimeko zentengiso kunye neenguqu kwishishini ziyatshintsha ngesantya esikhula ngokukhawuleza, zishiya iinkampani zisokola ukuphendula kwizinto ezibangela amaxabiso